कानुन को बलात्कार ले,बन्दैन यो देस..! ~ Khabardari.com
कानुन को बलात्कार ले,बन्दैन यो देस..!
4:35 PM Khabardari No comments
By - Prakash Dhungana
आदर्स र कुनै बाद ले, बन्दैन देश
बम बारुद र छुरा,हातले बन्दैन देश!
जवान जती सबै अब,परदेश लागि सके
बाँकी,बुढा, भुरा हरुले बन्दैन देश!!
हाम्रा भोट बोकी भट्टि छिरि हिड्दै छौ रे
जुवा सुरा सुन्दरी ले बन्दैन देश!!!
तरुनीलाई,बोकी कता हरायौ रे भन्छन.
सिन्दुर् पोते चुरा हरुले, बन्दैन देश!!!!
उध्योग धन्दा कलकारखाना,बन्द भै सके
बन्द हर्ताल चक्काजाम ले बन्दैन यो देस..!!!!
नेपालीहरु आफु आफुमा जुध्न तयार छन् रे
जात भाषाको काटा काट ले बन्दैन यो देस!!!!!
ज्यानमारा हरु सभासद र मन्त्रि भका छन् रे
कानुन को बलात्कार ले,बन्दैन यो देस..!!!!
तेसरी कमरेड झन बन्दैन यो देस...
Posted in: Poem,Prakash,साहित्य